BaHuTuTa – Page 109 – Online
ဒီနေ့ ဂုဏ် သိက္ခာနဲ့မေတ္တာတရားကိုလဲလှယ်ခဲ့တယ်..Busကားပေါ် ကျွန်မတက်သွားတော့ လက်ထဲမှာပိုက်ဆံ၂ထောင် ပါလာတယ် အလုပ်မှာထမင်းစားမှာက1800 ကားခက၂၀၀..ကွက်တိ ။ကားပေါ်မှာရှေ့ဆုံးခုံမှာနေရာရတယ်။အဲ့ဒီမှာ..ချောင်လေးမှာကုတ်ကုတ်လေးနဲ့..မျက်ရည်တွေဝဲနေတဲ့.အသက်(၇၀)ကျော် ခန့် ရှိတဲ့အရမ်းဆင်းရဲချို့ တဲ့ပုံရတဲ့ အဘိုးတစ်ယောက်ကို သွားတွေ့တယ် ။ ကိုယ့်ေ ဘးမှာ ထိုင်နေတဲ့သူတွေကိုဝေ့ဝဲကြည့်လိုက်တော့ အသက်ခပ်လတ်လတ်ပိုင်းတွေအများကြီး..သူတို့ကို အာ့အဘိုးအိုကြီးကို မမြင်ကြဘူးလားဆိုတဲ့ အကြည့်မျိုးနဲ့ အားမနာတမ်းကြည့်ပ လိုက်မိတယ်။တချို့ဆို အဲ့အဘိုးအိုခြေထောက်တွေတောင်တက်နင်းကြတယ်။ဘေးနားကအန်တီကြီးကိုမေးကြည့်တော့အဲ့တာ […]
အိန္ဒိယကျေးဇူးနဲ့ ထိုင်းရေတပ်ထက် နှာတဖျားသာသွားခဲ့ရတဲ့ မြန်မာရေတပ် ( ဘာသူတွေ ဘာပြောပြော လက်ရှိမှာ ထိုင်းရေတပ်ကျွတ်ကျဲ နေပါပြီ. အိန္ဒိယကျေးဇူးနဲ့ ထိုင်းရေတပ်ထက် နှာတဖျားသာသွားခဲ့ရတဲ့ မြန်မာရေတပ် ( ဘာသူတွေ ဘာပြောပြော လက်ရှိမှာ ထိုင်းရေတပ်ကျွတ်ကျဲ နေပါပြီ….)အန်ဒမန်ပင်လယ်ထဲမှာ ကျက်စားမယ့် မြန်မာ့ရေငုပ်သင်္ဘောကို မျက်ချေမပြတ် အနီးကပ်စောင့်ကြည့်သွားဖို့ရာ ထိုင်းရေတပ်အခြေစိုက်နံပါတ် […]
သင် ဘယ်တော့ဆို အိမ်ထောင်ကျမလဲဆိုတာ… သင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ လက်စွပ်လေးက ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ (အပျော်သဘောနဲ့ ပုံကို နှိပ်ပြီး ဝင်ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်) (1) ရွေးချယ်ထားသူအတွက် အိမ်ထောင်ချနိုင်မည့်ခုနှစ်က ၂၀၂၃ – ၂၀၂၅သင်က အိမ်ထောင်ပြုဖို့ အသင့်မဖြစ်သေးဘဲ အဲ့ဒီ့အတွက် နှစ်အနည်းငယ်လောက် ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေတယ်။ သင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ မြပြာလက်စွပ်က တည်ငြိမ်မှုနဲ့ အမှန်တရားကို […]
လူတယောက်ဟာ တောထဲတောင်ထဲမှာ ရွှေလိုက်ရှာတယ်။ တနေ့မှာ အလွန်ကြီးမားတဲ့ ရွှေတွင်းကြီးကို တွေ့လိုက် တ ယ်။ သူလဲ ရသလောက် ရွှေတွေကို တူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ ဘယ်လောက်တူးတူး ရွှေတွင်းကြီးက ရွှေဟာ မကုန်နိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် သူဟာ သူ့ရွာကို ပြန်ပြီး ရွာသားတွေကို ရွှေတွင်းကြီးဆီကို […]
ဘယ်လောက်ပဲ အသက်တွေရလာပါစေ။ လူတိုင်း လှချင်ကြပါတယ်။ နုပျိုနေသူတစ်ယောက်အတွက်တော့ အသက်ဆိုတာ ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုပါပဲ။ အသက် ၃၀ ဆိုတာ တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တဲ့ အရွယ်အပိုင်းတခြားတစ်ခုဖြစ်သလို အလှပဆုံး အချိန်တစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး။အသက် ၃၀ ဝန်းကျင်မှာ သင့်ကို ပိုပိုပြီးလှနေစေဖို့အတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပါ။ ရေကို သတိတရသောက်ပေးပါ။ […]
ဘုရင်စနစ်ကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးဆဲ နိုင်ငံများ
ကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဟာ ဘုရင်စနစ်ကနေ ဆင်းသက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါ တယ်။ ယင်းဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကနေ အများစုအာဏာဖြန့်ကျက်တဲ့စနစ်ကို ကူးပြောင်းခဲ့ကြရာက ယနေ့ကာလမှာဆိုရင်ဘုရင်စနစ်ကို ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံအရေအတွက်ဟာ အလွန်ကိုနည်းပါးသွားခဲ့ပြီ ဆိုပေမယ့် နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ခန့်တော့ ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။ ယနေ့အထိ ဘုရင်စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့ နိုင်ငံအများစုဟာဆိုရင်လည်း စည်းမျဉ်း ခံဘုရင်စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေကြတာဖြစ်ပြီး ဘုရင်၊ ဘုရင်မတို့ဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအာဏာကိုချုပ်ကိုင်ထားတာမျိုးလည်း နည်းပါးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သောနိုင်ငံတွေမှာတော့ […]
ယနေ့ခေတ်လူတော်တော်များများနဲ့ လူငယ်အများစု မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် နိုင်ငံတိုင်းမှာလက်ထပ် လက်စွပ်ကို ဘယ်ဖက် လက်သူကြွယ် မှာ ဝတ်ဆင်ကြပါတယ်ဒါပေမယ့် ဘာဖြစ်လို့ အဲ့လက်မှာ ဝတ်ဆင်ကြလဲ ? ဘယ်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကဆင်းသက်လာသလဲ ? ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ရှိနေကြပါတယ်…….အဲ့ဒီ့ အယူအဆ က လုူတွေရဲ့ ခန္မာကိုယ်မှာ သွေးလည်ပတ်မှုစနစ် ဟာ အမှန်တကယ်လည်ပတ်လုှပ် […]
ပြန်နွှေး မစားသင့်သည့် အစားအစာများ… ၁။ ဟင်းနု နွယ်ရွက် (Spinach) ချက်ပြီးသားဟင်းနု နွယ်ရွက်ကို ပြန်နွှေးပြီး မစားသင့်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဟင်းနုနွယ်ရွက်ထဲမှာပါတဲ့ နို က်ထရိတ်(nitrates) ဓာတ်ဆားကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ချက်ထားတဲ့ဟင်းနု နွယ်ရွက်ကို နွှေးလိုက်တဲ့အခါမှာ နိုက်ထရိတ် ဓာတ်ဆားကနေ နိုက်ထရစ် အက်စစ် အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပြီး […]
Vampire (သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်)တွေဟာ နေရောင်နဲ့ မထိတွေ့နိုင်ဘဲ ညအချိန်ကျမှ လူသွေးသောက်ဖို့ အမဲလိုက်လေ့ရှိတဲ့ ဒဏ္ဍာရီလာ မကောင်းဆိုးဝါးတစ်မျိုးလို့ လူသိများကြပါတယ်။ Vampire ဆိုတာဟာ လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံမှာ တူညီတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ တည်ရှိနေတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး လူတွေရဲ့သမိုင်းကြောင်းမှာ တူတူကပ်ပါလာတဲ့ သူတို့ရဲ့သမိုင်းအစကတော့ စာရေးဆရာ Bram Stroker ရဲ့ (၁၈၉၇)ခုနှစ်က […]
အလှအပကို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စံံချိန်သတ်မှတ်ထားတာချင်းမတူညီပါဘူး ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ နိုင်ငံတကာက လူတွေတော်တော်များများက လှတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စံချိန်လေးတွေပါ..။ သင်ဟာ ဒီအချက်တွေထဲက ရချက်နဲ့အထက် ကိုက်ညီနေရင်တော့ တကယ်ကိုလှပချောမောတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ..။ (၁) သင့်မှာ မျက်ခုံးမွှေးဆွဲစရာမလိုလောက်အောင် လှပပြီးထူထဲတဲ့ မျက်ခုံးမွှေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ တစ်ခါတလေရိတ်ရတာကလွဲပြီး အထူးတလည်ပြင်ဆင်ပေးစရာမလိုပါဘူး..။ (၂) သင့်ရဲ့ မျက်လုံးလေးဟာ […]